Ragga toodii aragnaye
Dumar talo ma laga deyey
Mohamed Hirsi | Sweden
”Dumar talo ma laga deyey”; waa sheeko maldahan oo macnaynaysa dhacdooyin run ah oo la xidhiidha taariikhda Soomaalida ee Casriga ah iyo wixii keenay dhacdooyinkaas. Sidoo kale waxay saadaalinysaa xal lagu nasto iyo wadooyinka lagu gaadhi karo mid ka mid ah.
Nuxurka qisadu wuxu leeyahay sidan:
”Waxa jiray umad lagu magacabo reer Soofmaal oo ku noolaan jiray dhul lagu magacaabo Dalsan. Reer Soofmaal waxay ahaayeen xoolo dhaqato. Dadku waxay ahaayeen qaar is jecel oo isu naxariista. Lagama aqoon deegaankooda caydh iyo cuduratoona. Sidoo kale colaadaha ayaa ahaa waxa ay maqlaan uun. Barwaaqo ayey iskaga jireen weligood. Laakiin Biyaha ayaa qaliil ku ahaa.
Iyagoo sidaas isaga nool oo ku qanacsan noloshooda ayey maalin maalmaha ka mida ku soo dul degtay marti aan la garanaynin. Martidii waa la soo dhaweeyey, balse kun jeer ayaa laga qoomamooday aakhirkii. Waxay u horseedeen reer Soofmaal silic iyo saxariir aan laga sheekayn karin. Markasta oo laysku dayo in wax laga qabto dhibkaas, xaaladu way sii xumaanaysay. Markasta oo loo maleeyo in xal la gaadhayba, waxa soo baxda dhibaato tii hore lagu illaabo. Aakhirataankii dumarka reer Soofmaal ayaa lagu wareejinayaa xal raadinta umadooda. Waxanay ku guulaysteen arin ragu ku rafaaday hagaajinteeda 100 sano”.
Qoraalkan waxan u doortay magaca ah : ”Dumar talo ma laga deyey” oo aan ka soo dhex xulay magacyo badan oo ku wada haboon in loogu magac daro qisada buuga. Waxa ka mida magacyadaas: ”Qisadii reer Soofmaal” ama ” Qisadii yaxaasyada” ama ”Wadadii halaagga” ama ”Ardaydii geed-is-mariska” ama ” Martidii nuxuusta”.
Faafin: Sept 13, 2002